Taariikhda My Butros » 4 Tips for Date a First
taariikhaha First leeyihiin awood u leh in la beddelo nolosheena. Waxa aan aaminsanahay in haddii aad haatan isku diyaarineysa ka mid, Malaha waxaan kaliya sameeyey aad flip caloosha, and for that, I apologize! Habka ugu fiican ee galaan taariikhda marka hore waa in aad isku dejiso, sidaas illoobin dhinaca beddelaya nolosha oo dhan. Halkii, aynu diiradda saaraan wada hadalka.
Jeer Sidaas badan, waxaan qabaa taariikhaha marka hore sida waraysiga shaqada, kaas oo sida xaqiiqada ah waxay dejisay gebi niyadda adag qabtaan oo ay ugu raaxeeysato, iyo dareen-celinta ugu badan ee wareysiga shaqada waa isku yaacsanaan, xaq u? Marka aynu tahay habdhiska, sometimes we forget the most critical conversational tool at our disposal: dhagaysto.
Tani waxay u muuqan yaabaa in fudud, laakiin waxaa la yaab leh Finensej in dunida maanta. Waxaan diiradda aad u badan oo ku saabsan diyaarinta our aflagaada digtoonaan ama bixinta kaamil ah in aynu dayacno si buuxda u habayn in qofka kale. Waxaan wax badan oo ka mid ah hal-safay weyn maqlay, oo waan jeclahay guys funny, laakiin waxa ku saabsan nin kuwaas oo dhab ahaantii maqlayaa waxa aad dhihi? Well, uu goolhaye. Haddii uu funny, Waxa kale oo, ka dibna aad si dhab ah Ghanna.
Ragga rabnaa in qof dumar ah oo wax dhagaysan, aad! Waxaan ma ka hadlayaan oo keliya maqalka erayada wuxuu ka yidhi, in kastoo uu kaasu waa tallaabo muhiim ugu horeeya. Dhab ahaantii ay dhegaysan erayada uu, uu ku oqoonsan, luqada jirka uu, iyo falalkiisa. Haweenka u muuqdaan in ay ku bixiso in waxyaalahaas dareenka aad u wanaagsan, laakiin on taariikhaha koowaad, waxaan marar badan is si diiradda saaray nafteenna (our dharka, timo, cuntada ee ilkaha, Yaa dalalka, iyo reapplications Bayjer) in aan iloobin sababta aan run ahaantii waxaa tahay qof.
Dhageysiga taariikhda waxaa ficil ahaan loogu balan qaadayo si loo caawiyo socodka wadahadalka. xirfadaha dhagaysiga Bad, Nooca shaqsiyad A? Halkan formula ah:
1. Su'aal: Haddii aad wadahadalo taariikhda ku saabsan waajibaadka shaqo ama dano gaar ah in aanad fahmin, ama amarada wax off ah menu aad waligaa maqashay, ma dareemaan su'aalo weydiinta doqon. Weydii iska. Dadka jecel in uu sharaxo waxa ay u ogaadaan wax badan oo ku saabsan, oo aad hada noqotay taariikhda galay khabiir ku ah, haddii taasi on matoorada baabuurta ama sushi. Yaa uusan rabin in uu dareemayaa in khabiir ku ah? Waxaan u muuqdaan in ay ka hadlaan si ka badan oo ku saabsan damacyo our, si aad u hesho in la ogaado qofka in hab macno leh.
2. Hako: Jidaynayey aad waqti taariikhda si fikirrada isaga ama iyada ku dhameysan waa caadiga ah soo jiidasho leh - iyo caddayn karaan adag tahay marka aad ku faraxsan ama dareemayaasha - laakiin waxa ay hal talaabo ka fog qaadashada runtii ku siin kara macluumaad. Mid ka mid ah jidka weyn ee waxan u samaynaysaan waa qaadashada kabasho biyo ah sida qofka waxaa ku dhameysteen fikir. Waxaa dadka siinayaa aamusay in la buuxiyo, oo marar badan ayaad u helaysaa in aad iyaga wax badan oo ku saabsan ka inclusions garanaysaan.
3. Damqadaan: Waxaa laga yaabaa in iyada oo kaliya ku dhameysatay iyada degree, ama mindhaa wuu kor ay u-dalacaada ah. Ka fakar sida aad dareemi lahaayeen booskaas. Waxaad malaha doonayaan in ay ka hadlaan fasallo aad ugu jeceshahay, waxa aad rabto in aad beerta ku, ama mashaariic aad ka shaqeeyeen inay fuulaan salaanka. Hadda aad qabto wax su'aalo weyn. Tani waa fursad meesha fikirka, hadayana jirin caddayn karaan mid wax tar leh in barashada ku saabsan qof kale.
4. Ku celceli: Haddii aad tahay qof si ay khusayso oo walwalsan tahay in aad qabto broccoli xayiran ilkaha oo kaliya ma awoodaan in ay diiradda saaraan faahfaahinta uu shaqo halka dareen ku Daynanaa Iyagoo ee isafgaradka ee jeebkaaga, at the very least try to pick up on keywords. Ma wuxuu odhan xogta? Now you can ask questions about what kind of data if this is something he loves, ama haddii uu isticmaalo xaddi ballaaran ee caffeine si ay u badbaadaan. laakiin daacad ah, iloobin isafgaradka marka aad awooddo, waxa kaliya oo weyddiiyaan!
Dabcan, weydiinaya su'aalo ku saabsan taariikhda ee xayawaanka(s) waxaa lagula talinayaa. Ma lover xayawaan? Check, fadlan. Taas waxaan u leeyahay Jees (iyo sort of dhab ah.)
Ku raaxayso taariikhda ugu horeeyay, nasato, oo aad leedahay maad! Xasuuso inaad dhagaysan. Your nolosha laga yaabaa in isbedel dhab ahaantii, laakiin Hey, cadaadiska lahayn.
Haweenka Successful waxaa All yeelan karaan?
Ma jiraan wax A Sida A Fight Good In Xiriirka noocaas ah?